Ireo ankizy tsy manana taratasy ara-dalàna ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2019 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, Ελληνικά, Filipino, Español, Nederlands, English
Ankizy Baloch any Iran. Sary avy amin'ny Mostafameraji (CC BY-SA 4.0)
Olona miisa iray tapitrisa mahery no tsy manana taratasy ara-dalàna ao Iran, ary ankizy no maro an'isa amin'izy ireo. Ny iray amin'ireo antony lehibe amin'ity toe-javatra mampahonena ity ny lalàna tranainy iray efa am-polo taonany izay mandrara ny vehivavy Iraniana tsy hanambady vahiny amin'ny zo hanome ny zom-pireneny amin'ny zanany. Efa maizina sahady ny hoavin'ireo ankizy Iraniana an'arivony raha mbola tsy teraka akory aza izy ireo. Tsy afaka mianatra, tsy mahazo fikarakarana ara-pahasalamana ireo ankizy ireo ary tsy tafiditra ao anaty angondrakitra nasionaly ihany koa ny anaran'izy ireo.
Maro ny olona tao amin'ny firenena no nankalaza tamin'ny volana Mey 2019 rehefa nanitsy ny lalàna manavakavaka ny Majlis (parlemantera) ao Iran. Nankatoa ny fanitsiana ny Filankevitry ny Mpiandry, vaomiera mandinika ny lalàna rehetra nolanian'ny depiote, saingy nampiany fa azo ampiasaina ho antony hitazomana ny fanomezana zom-pirenena ny “olana ara-piarovana”.
Saingy tsy hamongotra ny fanavakavahana rehetra atrehin'ny ankizy “tsy misy anarana” ny fanovana ny lalàna. Ny vahoaka Baloch vitsy an'isa miisa roa tapitrisa ao Iran, ohatra, izay mipetraka any amin'ny faritra mahantra akaikin'ny sisin-tany ifanolorana amin'i Pakistan sy Afghanistan dia iharan'ny fanavakavahana goavana avy amin'ny manampahefana Iraniana, izay mampiasa ny politikany amin'ny fanakanana ny vahoaka Baloch marobe tsy hanana zom-pirenena feno.
Nasser Boladai, mpitondratenin'ny Antokom-Bahoakan'i Balochistan sady filohan'ny Fikambanam-Bahoaka sy Firenena tsy voasolotena (UNPO), niteny tamin'ny Global Voices fa:
Nanambara ny halalin'ny fahoriany ny fijoroana vavolombelona nataon'ny vahoaka Baloch: avy amin'ireo reny izay manana nofinofy goavana amin'ny fandefasana ny zanany any an-tsekoly, sy avy amin'ireo vehivavy Iraniana izay manontany ny antony nanagiazan'ny manampahefana ny karapanondron'izy ireo, ka nahatonga azy ireo ho tsy afa-manoatra.
Efa ao anatin'ny ADN-n'ny Repoblika Islamika hatramin'ny niandohany ny politikan'ny famoretana ataon'ny manampahefana Iraniana amin'ireo foko sy ny antokom-pinoana vitsy an'isa. Tao anatin'ity lalao naharitra amam-polo taonany maro ity no niovan'ny vahoaka Baloch an'arivony tsy ho olom-pirenena saranga faharoa intsony fa ho lasa olombelona tsy hita(-n'ny mpitondra) maso.